Iindlela ezi-5 zokutshisa i-ISO kwiDVD okanye enye imithombo yeendaba | Iindaba zeGajethi
Ngaba ujonge indlela utshise i-ISO kwiDVD? Enkosi kwisantya esiphezulu somda we-intanethi esinokuthi senze ikhontrakthi yokujonga kwiwebhu, namhlanje Ukukhuphela umfanekiso we-ISO ezingqinelana nokusetyenziswa okanye imidlalo yevidiyo yenye yezona zinto zibalulekileyo ezinokuqwalaselwa ngabasebenzisi abaninzi.
Ukuba nemifanekiso ye-ISO kunokumela ukufakwa kwesoftware ethile ukuba sisebenzisa usetyenziso olusincedayo nyusa le mifanekiso. Ukuba asinaso isixhobo esikhethekileyo, ngelishwa oku ngekhe kwenzeke. Nangona kunjalo, Kuthekani ukuba sifuna lo mfanekiso we-ISO kwikhompyuter eyahlukileyo? Ukuba bekunjalo, kuya kufuneka siyitshise le mifanekiso ye-ISO kwidiski ebonakalayo (i-CD-ROM okanye iDVD) kwaye eyona nto ingcono, ugqithisele umxholo wayo kwisitya se-USB njengoko usenza IWindows 7 i-DVD DVD.
1 Izixhobo ezi-5 zokutshisa i-ISO kwiDVD
1.1 Iyasebenza @ ISO sokukhuphela
1.3 Isitshisi samahhala se-ISO
2 Tshisa i-ISO Windows 10
3 Nyusa ifayile ye-ISO Windows 10
4 Uyitshisa njani i-ISO kwi-Mac
5 Nyusa umfanekiso we-ISO kwi-Mac
Izixhobo ezi-5 zokutshisa i-ISO kwiDVD
Zonke iindlela ezizezinye esiza kuthi sizichaze ngeli xesha zinikezelwe kumandla utshise i-ISO kwimithombo eyahlukeneyo yokugcina, nangona eyona nto ibaluleke kakhulu kukuhambelana kwezi zixhobo ngeefomathi zemifanekiso eyahlukileyo ekhoyo namhlanje. Ngesi sizathu, ukuba ufuna isixhobo esingasindi esinceda kuphela ukutshisa le mifanekiso ye-ISO nakweyiphi na enye indlela, ungasebenzisa nayiphi na kwezi siza kuthi sicebise apha ngezantsi.
Uyenza njani i-USB ekhuphayo
Iyasebenza @ ISO sokukhuphela
Sinokukuqinisekisa ngokuqinisekileyo oko Iyasebenza @ ISO sokukhuphela Enye indlela efanelekileyo kakhulu yokutshisa le mifanekiso ye-ISO kwidiski ebonakalayo. Eli ziko ligabadele, oko kuthetha ukuba kufuneka kuphela ukuba sifake i-CD-ROM, iDVD okanye idiski eblue Ray kwitreyi yekhompyutha kwaye kamva, khetha umfanekiso we-ISO ekufuneka siwugcinile kwezi ndaba.
Ukhetho olongezelelweyo olunjenge Ukwenza iikopi ezinkulu yinto asinika yona u-Active @ ISO Burner, Oko kuthetha ukuba ukuba sifuna iikopi ezili-100 singayicwangcisa kwesi sixhobo. Ikwahambelana neediski ezinokubhalwa ngokutsha, into esetyenziswa ngokubanzi xa sifuna ukwenza ushicilelo lokuqala lovavanyo lomfanekiso we-ISO.
BurnCDCC ikwayenye into elungileyo utshise umfanekiso we-ISO kwiDVD okanye nakweyiphi na into ebonakalayo (njengesixhobo esidlulileyo).
Amasimi ayinxalenye yesixhobo sombane akhankanya ithuba lokukhetha umfanekiso we-ISO, idiski esiza kuyitshisa kuyo, qinisekisa ukubhala, vala iseshoni yokurekhoda kwaye Itreyi eza kukhutshwa emva kokuba kugqityiwe ukurekhoda. Ezantsi kolu khetho sinokuphinda sikhethe into encinci eya kuthi isincede sikhethe isantya sokurekhoda imifanekiso yethu ye-ISO.
Ungawutshintsha njani umxholo womfanekiso we-ISO uye kwintonga ye-USB ngaphandle kwesicelo
Isitshisi samahhala se-ISO
Nangona ujongano olwahlukileyo, kodwa Isitshisi samahhala se-ISO iba yenye indlela esinokuthi sisebenzise simahla kuyo utshise i-ISO kwiDVD. Iindawo zonxibelelwano ziyafana kakhulu nezixhobo zangaphambili.
Kuya kufuneka sikhethe umfanekiso we-ISO kuphela, iyunithi apho siza kuya kuyitshisa khona, isantya sokubhala kunye nenketho (ibhokisi) yeseshoni yokurekhoda ukuvala yakuba inkqubo igqityiwe. Esi sixhobo sisebenza ukusuka kwiWindows XP ukubheka phambili, siyinzuzo enkulu kuba akusayi kubakho ukungangqinelani xa kuziwa ekusekeleni imifanekiso yethu ye-ISO kwindawo ebonakalayo.
ImGBurn Inonxibelelwano olucacisiweyo kancinci, kuba iyakusibonisa yonke loo misebenzi esinokuthi siyikhethe xa sifuna ukwenza isenzo esithile ngemifanekiso yethu ye-ISO.
Umzekelo, Nazi iindlela onokukhetha kuzo gcina imifanekiso ye-ISO kwidiski, yenza umfanekiso we-ISO kwifolda okanye kwizikhombisi, Ithuba lokudala umfanekiso we-ISO kwidiski ebonakalayo, ujonga imeko yomfanekiso wethu we-ISO, phakathi kwezinye izinto ezimbalwa.
I-ISOBurn iyahambelana kwiWindows XP ukuya phambili kwaye isinika ujongano olulula ukuphatha. Njengalezi zixhobo zikhankanywe apha ngasentla, apha sinokukhetha umfanekiso we-ISO kunye nendawo esifuna ukuyitshisa kuyo.
Inketho eyongezelelweyo eboniswe ezantsi kwe-ISOBurn interface iya kusivumela yenza ukucima ngokukhawuleza kwediski efakiwe. Lo msebenzi unokuba luncedo xa sisebenzisa idiski engabhalwayo.
Nasiphi na isicelo esele sichazile ngentla singasetyenziselwa ukutshisa i-ISO kwidiski ebonakalayo, enokuba yile CD-ROM, iDVD okanye iBlue Ray.
Tshisa i-ISO Windows 10
Ukuphehlelelwa Windows 10 imele inani elikhulu lotshintsho, hayi ekusebenzeni kweWindows njengoko besikunikile de kube ngalamzuzu, kodwa kwakhona xa kufikwa ekusebenziseni izicelo zomntu wesithathu, kuba inkampani esekwe eRedmond ingenise izinto ezintsha. ezazingafumaneki kwiinguqulelo ezidlulileyo, njengokhetho loku utshise iifayile ze-ISO kwiCD okanye kwiDVD ngaphandle kokusebenzisa usetyenziso lomntu wesithathu.
Inkqubo yokwenza iCD okanye iDVD kumfanekiso we-ISO ilula kakhulu kunezicelo zomntu wesithathu ezikhoyo kwintengiso. Kuba kufuneka sizibeke ngaphezulu kwifayile ebuzwayo, ukusuka kwifayile ekhangela kwaye ucofe kuyo iqhosha le mouse lasekunene. Okulandelayo kufuneka Cofa kwiBurn Disc Image.
Kwinyathelo elilandelayo, iwindow iya kuboniswa apho kufuneka sichaze ukuba yeyiphi iyunithi esifuna ukuyitshisa umfanekiso wediski. Ukuba sine-optical drive kwi-PC yethu kuphela. Emazantsi efestile, iiWindows zisinika ithuba lokuba jonga ukuba idatha irekhodwe ngokuchanekileyo nje ukuba inkqubo igqityiwe.
Gcina ukhumbula ukuba ukuba sele sinesicelo esifakelweyo esijongene nokulawulwa kweefayile ze-ISO, ukhetho lweemenyu endizichazileyo aluyi kubakho, ke kuya kufuneka ucime usetyenziso olungagqibekanga kwezi njongo okanye uye ku iipropathi zefayile kwaye usete ifayile ukuba ijonge jonga ukuvula ezi ntlobo zeefayile.
Nyusa ifayile ye-ISO Windows 10
Izicelo zomntu wesithathu ukuba zikwazi ukutshisa iifayile ze-ISO kwiCD okanye kwiDVD, kwiimeko ezininzi zisivumela ukuba sinyuse loo mifanekiso ukufikelela kumxholo wayo. ngaphandle kokuyikopisha kwi-optical drive. Windows 10 ikwasivumela ukuba senze lo msebenzi ngokukhawuleza kwaye ngokulula kwaye ngaphandle kokubhenela kwizicelo zomntu wesithathu nangaliphi na ixesha.
Ukubeka umfanekiso we-ISO kuthi Windows 10 PC, kufuneka siye kwifayile ebuzwayo kwaye ucofe kwiqhosha lasekunene ukukhetha iNtaba ukhetho. Imizuzwana embalwa kamva, kuxhomekeke kubukhulu bomfanekiso, kufuneka siye kule Khompyuter> Izixhobo kunye nokuqhuba, apho Umxholo womfanekiso we-ISO uya kufumaneka njengedrive entsha.
Kanye asisadingi mxholo womfanekiso we-ISO kufuneka siyicime ukuze iyeke ukuthatha indawo ethe kratya kwihard drive yethu. Ukwenza oku, kufuneka sibeke imouse phezu kwayo kwaye ucofe ekunene ukukhetha u-Khupha.
Njengakwicandelo elidlulileyo, ukuba olu khetho aluveli kwiimenyu, kufuneka siqhubeke nokuhlela iipropathi zokuvula zefayile ye-ISO, ukuvula ngesikhangeli, okanye khipha ngokupheleleyo isicelo somntu wesithathu esisisebenzisileyo ukuza kuthi ga ngoku.
Uyitshisa njani i-ISO kwi-Mac
Njengoninzi lwe-Mac kunye nemisebenzi, ukutshisa umfanekiso we-ISO kwi-CD okanye kwi-DVD yinkqubo elula kakhulu kwaye ayifuni ukuba sisebenzise izicelo zomntu wesithathu, njengoko yenzayo ngaphambi kokufika Windows 10 kwintengiso. Ukutshisa umfanekiso we-ISO kwi-optical drive, kufuneka sime ngaphezulu kwifayile ebuzwayo kwaye ucofe kwiqhosha lasekunene. Emva koko, sikhetha Tshisa umfanekiso wediski "igama lefayile ye-ISO" kwidiski.
Okulandelayo, imenyu efanayo naleyo sinokuyifumana Windows 10 iya kuboniswa, apho kufuneka ukhethe idrive apho sifuna ukuyikopa khona, usete isantya sokurekhoda (kuhlala kucetyiswa ukuba ube sezantsi kangangoko, ngakumbi ukuba ikhompyuter yethu ineminyaka embalwa ubudala) kwaye ukuba siyafuna jonga idatha xa sele kwenziwe ukurekhodwa. Ukuqala inkqubo, cofa ku Gcina kwaye inkqubo iya kuqala.
Nyusa umfanekiso we-ISO kwi-Mac
Njengendlela edlulileyo, ukuba sifuna ukufaka umfanekiso kwi-Mac yethu ukufikelela kumxholo wayo ngaphandle kokurekhoda ngaphambili kwi-optical drive, akufuneki sibhenele kwizicelo zomntu wesithathu, kodwa inkqubo yokusebenza ngokwayo isinika isixhobo esifanelekileyo ukuze sikwazi ukuyenza. Ukuvula umxholo womfanekiso we-ISO kufuneka sikwenzile cofa kabini kuyo ukuze uvule ngokungathi yiyunithi. Yenziwe. Awunyanzelekanga ukuba wenze enye into, njengokucofa kabini kuvula umkhangeli kunye nomxholo wefayile.
Ngaba uyazi ezinye iindlela zokutshisa umfanekiso we-ISO kwiDVD okanye enye imidiya?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Tshisa i-ISO kwiDVD
Siyavuyisana nenqaku, zizixhobo ezintle ukutshisa i-ISO. I-ImgBurn yenye yezona zinto zibalaseleyo, ngaphandle kwamathandabuzo, nangona ineendlela ezizezinye ezingenanto yakwenza nomona.
ISanDisk iXpand Base, ihlawulise i-iPhone yakho kunye nesipele ngaxeshanye